I-Leixlip - IntoKildare
ILeixlip ibheka uMfula iLiffey enyakatho-mpumalanga County Kildare, 17km entshonalanga yeDublin. Zama ukudoba kwenye yezindawo ezinhle kakhulu ze-salmon angling futhi uthande ama-tapestries amahle eLeixlip Castle. Iya eLeixlip Manor Hotel ukuze uhlole izingadi zayo ezingenasici, ume ngelukuluku lokwakha elaziwa ngeWonderful Barn noma uhambe uzulazula eduze kweRoyal Canal Way - jabulela ikhefu lokuphumula kule ndawo enhle.
ILeixlip itholakala ekuhlanganeni kwemifula emibili, iThe Rye neLiffey. Lezi zakha imingcele yasendulo esikhathini esidlule se-Celtic sase-Ireland futhi idolobha libiza igama lalo kumaViking ahlala lapha ngekhulu lesi-9. ILeixlip Castle, inqaba yaseNorman, ihlala enkabeni yedolobha namuhla futhi ibisezandleni zomndeni wakwaGuinness kusukela ngo-1958. UGuinness phambilini, u-Arthur, waqala indawo yakhe yokuqala yokuphuza utshwala eLeixlip esebenzisa imigwaqo yamanzi ukusabalalisa izinto ezimnyama kubantu abaningi. Lesi yisiqalo esihle sika-Arthur's Way, umzila we-16km olandela impilo ka-Arthur kusukela azalwa aze afe.
Ukubukwa Okuphezulu kuLeixlip
Indawo yokudlela yase-Arkle & Indawo yokudlela
Ibha nendawo yokudlela ehlotshisiwe ethokomele yango-1920 enikezela ngokuhlangenwe nakho okwehlukahlukene kokupheka.
I-12th century Norman castle equkethe izinto eziningi zomlando ezithakazelisayo nezingavamile.
Amagugu afihliwe ama-5 eKildare ngeke Uwathole Encwadini Yomhlahlandlela
VOTE: Ikuphi i-chipper ehamba phambili kaKildare?
Thola okuningi kuLeixlip
Ubuciko NamasikoIzindlu & Izingadi
Inkantolo Yard Hotel